एनआरएन उम्मेदवारहरु - Hello Patrika
३० असोज २०७६, काठमाडौं । एनआरएनको चुनावी प्रक्रिया शुरु भएको छ । एनआरएन उम्मेदवारहरुको बारेमा कौतुहलता पनि बढेको छ ।
अध्यक्षका प्रत्यासी २ जना प्रतिश्पर्धि देखिएका छन्- कुल आचार्य र कुमार पन्त ।
उपाध्यक्षमा ९ जना प्रतिश्पर्धि देखिएका छन् । उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा हिक्मतबहादुर थापा, किरणविक्रम थापा, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, डा. बद्री केसी, मन केसी, धर्मराज अधिकारी, सोनाम लामा र डा. केशव पौडेल छन् ।
महिला उपाध्यक्षमा सपिला राजभण्डारी र रविना थापा रहेका छन्।महिला उपाध्यक्ष एकजना निर्वाचित हुनेछन् र ।
महासचिवमा जानकी गुरुङ र डा. हेमराज शर्माको उम्मेदवारी परेको छ ।
२ जना निर्वाचित हुने सचिव पदमा दीपकप्रसाद ओली, सुष्मा लिम्बु, अभिमानसिंह बस्नेत, शिवकुमार बरुवाल, गौरीराज जोशी, आरके शर्मा र विनय अधिकारीको उम्मेदवार पिरेको छ ।
कोषाध्यक्ष पदमा सोमनाथ सापकोटा, महेशकुमार श्रेष्ठले र सुदन थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसैगरी एक जना निर्वाचित हुने सहकोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल र गोविन्दप्रसाद गौतमको उम्मेदवारी परेको छ भनें महिला संयोजकमा प्रमिला खड्का बस्नेत, भोमादेवी लिम्बु र संगीता मरहट्टाको उम्मेदवारी परेको छ । युवा संयोजकमा हिमाल गुरुङ, स्वतन्त्रप्रताप थापा र सुदीप कार्कीको उम्मेदवारी परेको छ।
एनआरएनको इतिहासमा नै पहिलोपल्ट आश्थाका आधारमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थि प्यानलमा बाँडिएर चुनाव हुन लागेकाले प्यानलबाट लडिने चुनाव प्रति असन्तुष्टि जनाए पनि कतिले आश्था सबैको हुने भन्दै स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् । प्यानल बनाएर लडिएको चुनावमा कडा प्रतिश्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।
चक्रपथमा ठाउँ-ठाउँमा अन्डरपास बन्ने